Word Foundation • About Us - Daabacayaasha Fikirka iyo Diidmada
Word Foundation, Inc. waa urur aan faa'iido doon ahayn oo u kireysan gobolka New York bishii Meey 22, 1950. Kani waa ururka kaliya ee jira ee la aasaasay isla markaana u oggolaaday Mudane Percival ujeeddooyinkan. Aasaasiyadu lama xiriirin ama xiriir lama lahan urur kale, mana taageerto ama taageerto shaqsi kasta, hagaha, hagaha, macallinka ama koox sheeganeysa in loo waxyooday, la magacaabay ama haddii kale loo idmay inay sharxaan oo tarjumaan qoraalada Percival.
Sida ku xusan xeerarkeenna, aasaasku wuxuu yeelan karaa tiro aan xadidnayn oo xubno ah oo doorta inay siiyaan taageeradooda iyo inay ka faa'iideystaan ​​adeegyadooda. Darajooyinkan waxaa ka mid ah, amaano-hayeyaal leh karti gaar ah iyo aagag khibrad u leh, kuwaas oo iyagu doorta Gole Agaasimayaal kuwaas oo mas'uul ka ah maaraynta guud iyo xakameynta howlaha shirkadda. Wakiilladu iyo Agaasimayaashu waxay ku nool yihiin aagag kala duwan Mareykanka iyo dibaddaba. Waxaan si wada jir ah ugu soo biirnay kulan sanadle ah iyo isgaarsiinta socota sanadka oo dhan si aan u fulino ujeedada aan wadaagno-si aan u sameyno qoraalada Percival oo si fudud loo heli karo iyo caawinta ardayda kale ee nagala soo xiriirta meelo badan oo adduunka ka mid ah si aan wax uga qabano waxbarashadooda iyo caqabada aadanaha badan rabitaankooda ah inay fahmaan jiritaankan dunida. Raadinta ku saabsan raadinta runta, Fikirka iyo Dareenka aan la sharraxin marka loo eego baaxadda, qoto dheer iyo waxtarka.
Marka, dadaalka iyo mas'uuliyaddayada ayaa ah inaan dadka adduunka u sheegno waxa ku jira iyo macnaha buugga Fikirka iyo Dareenka iyo waliba buugaagta kale ee uu qoray Harold W. Percival. Laga soo bilaabo 1950, The Word Foundation waxay daabacday oo qaybisay buugaagta Percival waxayna ka caawisay akhristayaasha fahamkooda qoraallada Percival. Fidintayadu waxay buugaag siisaa maxaabiista ku jirta xabsiga iyo maktabadaha. Waxaan sidoo kale bixinnaa buugaag qiimo jaban markii lala wadaagi doono dadka kale. Iyada oo loo marayo barnaamijkeena Ardayga ilaa Ardayga, waxaan gacan ka geysaneynaa sidii loo fududeyn lahaa marin loogu talagalay kuwa ka tirsan xubnaheenna jecel inay wada bartaan shaqooyinka Percival.
Tabaruceyaashu waxay muhiim u yihiin ururkayaga, iyagoo naga caawinaya inaan sii ballaarino qoraallada Percival ee akhriska. Waxaan nasiib u helnay inaan helno saaxiibo badan sanado badan. Waxyaabaha ay ka midka yihiin waxaay ka mid yihiin buugagga maktabadda maktabadda, u diraan buug-yaraheena asxaabta, abaabulida kooxo waxbarasho oo madaxbannaan, iyo hawlo isku mid ah. Waxa kale oo aanu helnaa tabarucaad dhaqaale oo muhiim u ahaa inagoo naga caawinaaya inaan sii wadno shaqadeena. Waan soo dhaweyneynaa waana ku mahadsantahay caawimadan!
Marka aynu sii wadno dadaalladeenna si aan ula wadaagno Iftiinka Mujaahidiinta ee bani'aadamnimada, waxaan si qadarin ah ugu martiqaadaynaa akhristeyaasheena cusub inay nagu soo biiraan.
"Fariinkayaga" wuxuu ahaa tifaftirihii ugu horreeyay ee uu qoray Harold W. Percival ee majaladda joornaalka, Word The. Wuxuu abuuray nooc gaagaaban oo tifaftirka ah oo ah bogga ugu horreeya ee majaladda. Kor ku xusan is soocelinta tan gaaban version ka muggii ugu horreeyay ee shan iyo labaatankii mug ee xidhnaa, 1904 - 1917. Tifatiraha ayaa laga wada akhrin karaa dhammaanteed Bogga daabacaadda.